इन्भेष्टमेण्टको खुद नाफा १ अर्ब ८३ करोड ! - Arthatantra.com
इन्भेष्टमेण्टको खुद नाफा १ अर्ब ८३ करोड !
काठमाण्डौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
बैंकले निक्षेप तथा कर्जा लगानीमा गरेको बृद्धिले नाफा बढाउन सघाएको हो । बैंकले कर्जा लगानी मात्रै करिब १६ रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । कर्जामा भएको बृद्धिले व्याज आम्दानी ५० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यसले खुद नाफा बढाएको हो ।
बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० करोड रुपैयाँले धेरै हो । गत वर्ष यस्तो आम्दानी दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै विदेशी विनिमय कारोबारबाट ३७ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यो आम्दानी पनि निकै धेरै हो । गत वर्ष बैंकले विदेशी विनिमयको कारोबारबाट ३२ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । राइटव्याक गरेर पनि बैंकले नाफामा ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थपेको छ । बैंकले यहि अवधिमा ४८ करोड रुपैयाँ संभावित नोक्सान व्यहोर्न प्रोभिजन गरेको छ ।
बैंकले फि, कमिशन र डिस्काउन्टबाट ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष यी शीर्षकमा ३७ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्म यो बैंकमा निक्षेप एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ८४ अर्ब ३७ करोड पुर्याएको छ । बैंकको रिजर्भमा निकै ठूलो रकम जम्मा भएको छ । चैत मसान्तसम्म नौ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ यो बैंकको रिजर्भ कोषमा छ । यही वर्ष फरदर पब्लिक अफरिकमा केही सेयर बेचेपछि बैंकले आफ्नो रिजर्भ निकै बलियो बनाएको हो ।
२० बैशाख २०७३, ९.००
वि.सं.२०७३ वैशाख २० सोमवार ११:४७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे माछा बेचेरै तीन दिनमा ५० लाख आम्दानी
पछिल्लाे नबिलको नाफा २ अर्ब !
कालिका लघुवित्तको १८ हजार कित्ता सेयर किन्ने मौका, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
वि.सं.२०७८ मंसिर १३ सोमवार ११:२९
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने...
ग्लोबल आइएमई बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, कति तोक्यो ?
वि.सं.२०७८ मंसिर १३ सोमवार ११:०६
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको बोनस सेयरको मूल्य समायोजन भएको...